नेटबल च्याम्पियनसिपले १३औं सागलाई पनि फाइदा पुगेको छ : मोहनबहादुर बस्नेत, अध्यक्ष नेपाल नेटबल संघ : नेपालमाला
नेटबल च्याम्पियनसिपले १३औं सागलाई पनि फाइदा पुगेको छ : मोहनबहादुर बस्नेत, अध्यक्ष नेपाल नेटबल संघ
नेपालको राजनीतिमा मोहनबहादुर बस्नेतले छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न सफल भएका छन् । आठौं महाधिवेशनदेखि नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य रहँदै आएका बस्नेत, गाविस अध्यक्ष, क्षेत्रीय सभापति, काठमाडौं जिल्लाको कोषाध्यक्ष हुँदै अहिले नागार्जुन नगरपालिकाको प्रमुख छन् । यसअघिको संसदीय निर्वाचनमा पार्टीले टिकट दिँदा पनि चुनाव नलडेका बस्नेत आफ्नो क्षेत्रका जनताको सेवाका लागि नगरप्रमुख बन्न भने तयार भए । स्थानीय विकास र समाज परिवर्तनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएका बस्नेत विगत ६ महिना अघिदेखि खेलकुदमा पनि सक्रिय रहँदै आएका छन् । नेपाल नेटबल संघको अध्यक्ष भएपछि खेलकुदलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका बस्नेत दक्षिण एसियाली नेटबल फेडरेसनको नेतृत्व तहमा पनि पुगेका छन् । दक्षिण एसि याली नेटबल फेडरेसनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बस्नेतसँग प्रथम दक्षिण एसियाली नेटबल च्याम्पियनसिप र समसामयिक खेलकुदका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी :
दक्षिण एसियाली नेटबल फेडरेसनको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । फेडरेसनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
दक्षिण एसियामा नेटबल नयाँ खेलका रुपमा उदाएको छ । अन्य देशमा धेरै पहिलेदेखि नै लोकप्रियता हासिल गरे पनि दक्षिण एसियाली मुलुकमा भने अलि पछि मात्रै यो खेल विकास भएको हो । नेपालमा सन् २०१० मा सुरु भए पनि यो खेल नयाँ र नौलो नै छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ६ महिना अघि संघको नेतृत्व मलाई दिएको थियो । हामीले जिम्मा पाएलगत्तै दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना गर्ने घोषणा गरेका थियौं । सोही घोषणा अनुरुप यही कार्तिक १ गतेदेखि ५ गतेसम्म प्रथम दक्षिण एसियाली नेटबल च्याम्पियनसिप आयोजना ग¥यौं । दक्षिण एसियाका केही मुलुकबीच राजनीतिक तनाव बढिरहेको विषम परिस्थितिमा पनि हामीले सबैलाई समेटेर च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न सफल भयौं । यही च्याम्पियनसिपका दौरान दक्षिण एसियाली नेटबल फेडरेसनको कंग्रेस सोमबार काठमाडौंमा बसेको थियो । कंग्रेसले मलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । सबै राष्ट्रलाई समेट्न सकेकै कारण सबैले नेपालको नेतृत्व स्वीकारेका हुन् । यसले के सन्देश दिएको छ भने मंसिर १५ मा १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अवश्य पनि हुन्छ । दुई छिमेकी मुलुकबीच राजनीतिक तनाव भए पनि खेलकुदमा सबैले सबैसँग हातेमालो गर्न तयार छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । यो देश र समग्र खेलकुदका लागि सुखद् विषय हो । अर्को कुरा अध्यक्ष चुनिनुलाई मैले अवसरका साथै चुनौतीका रुपमा लिएको छु । यसका साथै नेपाल सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग सहकार्य गरेर नेटबललाई संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नेछु । साथै सामुदायिक तथा निजी विद्यालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने कार्यक्रम बनाउँछौं । सबै उमेरका महिलाहरुलाई सहभागिता गराउन र उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा नेटबल सहायकसिद्ध बन्न सक्तछ । जगबाट खेलाडी उत्पादन गर्नुपर्दछ भनेर नेटबलले देखाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने छौं । दक्षिण एसियामै नेटबललाई लोकप्रिय बनाउन मैले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।
दक्षिण एसियाली नेटबल फेडरेसनको नेतृत्वलाई अवसर र चुनौतीका रुपमा लिएको छु भन्नुभयो, त्यो चुनौती सामना गर्ने सामथ्र्य राख्नुहुन्छ ?
मैले आफ्नो जीवनकालमा संधै कठीन काम मात्रै गर्दै आइरहेको छु । यस्ता कार्यक्रमलाई मैले सदैव अवसरका साथै चुनौतीका रुपमा लिँदै आइरहेको छु । सबै साथीभाइ, बौद्धिक जगत र सरकारले नै मलाई साथ र सहयोग गरेका कारण सफलता पनि हासिल गर्दै आएको छु । यसका साथै मलाई दिएका हरेक जिम्मेवारी कुसलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएको छु ।
दक्षिण एसियाली नेटबल फेडरेसनमा पनि भारतलगायतका देशले अध्यक्षमा इच्छा र आकांक्षा देखाउनु भएको थियो । तर, प्रथम दक्षिण एसियाली नेटबल च्याम्पियनसिपमा गरेको व्यवस्थापन देखेपछि उहाँहरुले सहानुभूतिपूर्वक नेतृत्व हामीलाई सुम्पन राजी हुनुभयो । नेपालले सबैलाई मिलाउन सक्छ र उनीहरु इमान्दार र सोझा छन् भन्ने कुरा उनीहरुको मनमा पार्न सफल भयौं । त्यही कारण नेतृत्व हामीलाई प्राप्त भएको छ । यो मैले मात्र पाएको अवसर होइन, देशको प्रतिष्ठाका लागि पाएको अवसर पनि हो ।
दक्षिण एसियाका मुलुकबीच आपसी सम्बन्ध र भाइचारा विस्तारमा पनि यसले मद्दत पुग्छ होला नि होइन ?
अवश्य पनि । अहिले भारत र पाकिस्तानबीच राजनीतिक तरलता उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा भारत र पाकिस्तान नेपाल आएर खेल्लान् भन्ने गम्भीर सवाल हाम्रा सामु थियो । हामीले लगातार पहल ग¥यौं । जसको फलस्वरुप दक्षिण एसियाका सबै राष्ट्रलाई एक ठाउँमा भेला पारेर च्याम्पियनसिप गर्न सफल भयौं । यसले साग गेम्सलाई पनि मद्दत पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यो च्याम्पियनसिपले सरकारको पनि मनोबल बढाएको छ । अब दक्षिण एसियाली मुलुकबीच कुनै समन्वय र सहकार्य गर्नुपरेमा यो काम गर्न नेटबल फेडरेसन नेतृत्व गर्न तत्पर छ ।
भिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आउनु भएको तपाईं खेलकुदमा आउनु भएको छ । खेलकुद क्षेत्र कस्तो पाउनु भयो ?
खेलकुदले मानिसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समृद्धिका साथै एकआपसमा मित्रताको भावना विकसित गर्दछ । यो सबै उमेरका लागि अत्यन्त आवश्यक छ । खेलले राष्ट्रको नाम चिनाउने र आर्थिक विकास गर्ने काम गर्दछ । म पनि स्कुले जीवनदेखि नै खेलकुदमा सक्रिय रहँदै आएको छु । त्यसैले खेलकुदलाई नजिकबाटै हेर्दै आएको छु । स्थानीय प्रतिनिधिका नाताले आर्थिक, सामाजिक विकाससँगै खेलकुदलाई पनि सँगसँगै लैजानु पर्दछ भनेर नगरपालिकाले काम गर्दै आएको छ । खेलाडीको प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । अर्को कुरा खेलकुद, राजनीति र समाज सेवालाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सदैव क्रियाशील पनि रहनेछु ।
दुई वर्षको अवधिमा नागार्जुन नगरपालिकामा खेलकुद क्षेत्रमा थुप्रै काम भएको छ । नेटबल, फुटसल, तेक्वान्दो, बास्केटबल, फुटबल, ब्याडमिन्टन, करातेलगायतका खेलको कभर्डहल निर्माण भइरहेको छ । आगामी दिनमा खेलकुदलाई अझ प्राथमिकतामा राखेर नगरपालिकाले काम गर्नेछ ।
नागार्जुन नगरपालिकालाई खेलमैत्री नगरपालिकाका रुपमा विकास गर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ ?
मेरो दुई वर्षे कार्यकालमै थुप्रै खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ । अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पूर्वाधार सम्पन्न भएपछि खेलकुदका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन देखिनेछ । खेलकुदसँगै पर्यटन, कलासंस्कृति, शिक्षा, स्वस्छ वातावरणका रुपमा नगरपालिकालाई विकास गर्ने अभियानमा लागेका छौं ।
अर्को कुरा नेटबल च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने क्रममा महसुस भयो कि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कभर्डहल नै छैन । भएका हल पाउन पनि निकै गाहारो छ । बुझ्दै जाँदा थाहा भयो हामीसँग त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हल नै धेरै रहेनछ । त्यसले मलाई धेरै दुखी पनि बनायो । त्यही भएर अर्को वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुआयामिक हल बनाउने काम नगरपालिकाले थाल्नेछ । सबैलाई सहभागी गराएर यो काम फत्ते गराउने छौं ताकी अरु नगरपालिका र स्थानीय निकायले पनि हामीबाट केही सिक्न सकुन् ।